तपाइँ का दुई अस्त्र -- संसद र सड़क -- दुबै फेल भएका छन।
तपाइँ अर्को पटक चुनाव लड्दा फेरि धाँधली हुँदैन भन्ने के छ? सड़क त एक महिना नाघ्यो तात्तिएको। अब अर्को उपाय के?
अब स्वराज को बाटो लाग्ने कि? स्वराज को बाटो अंतरिम संविधान मा मधेसी क्रांति ले स्थापित गरेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" ले नै दिएको हो। संविधान मा वाक स्वतंत्रता को प्रत्याभूति हुँदा हुँदै "किन बोलिस" भन्ने कुरा आउँदैन। स्वराजी हरुले गर्दा यो संविधान आएको होइन, शासक हरुले गर्दा हो। Let's be clear about that.
जनता सड़क मा आएको अवस्था छ। भारतपरिवेष्टित देश मा भारत रुष्ट भएको अवस्था छ। क्रांतिलाई उत्सर्ग मा पुर्याउने अर्को राम्रो समय के हुन सक्छ?
त्यो उत्कर्ष भनेको स्वराज हो कि?
स्वराज र पराजय मा एउटा रोज्नु पर्ने बेला आएको हो?
Citizenship ck raut Constituent assembly constitution federalism Madhesh madhesi madhesi janajati dalit kranti 2015 tharu Upendra Yadav